नेपाल आज | भारतीय राजदूत पुरीलाई झुक्याएर कार्यक्रममा बोलाइयो
देश कभर स्टोरी समाज
बास्कोटालाई अपमान गर्ने प्रितम सिंह समूहको योजना असफल
काठमाडौं । नेपालमा रहेका शिखहरुको कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई झुक्याएर निम्तो गरिएपछि यो प्रकरणले बजार तताएको छ ।
शिखहरुका धर्मगुरु श्री गुरु गोविन्द सिंहजी महाराजको ३५३ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित समारोहको प्रमुख अतिथि भनेर भारतीय राजदूत पुरीलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो ।
गत आइतबार (पुस २९) मा काठमाडौंको कुपण्डोलमा गुरुद्वारा नानक सत्संगले आयोजना गरेको जन्मोत्सवमा राजदूत पुरीलाई प्रमुुख अतिथि मानेर निम्तो मात्रै गरिएको थिएन, सोही बमोजिम निमन्त्रणापत्र पनि वितरण गरिएको थियो । राजदूत पुरी आफैं पनि शिख भएका कारण उनलाई नेपालमा रहेका शिखहरुको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनु गौरवको कुरा हुन्थ्यो । त्यसमाथि उनी प्रमुख अतिथिका रुपमा शिखका धर्मगुरुको जन्मोत्सवमा जान पाउँदा हर्षित पनि थिए । तर आयोजकले गरेको गम्भीर लापरबाहीका कारण सो कार्यक्रम राजदुत पुरीका लागि खल्लो हुन पुग्यो ।
जानकारहरुका अनुसार सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा आयोजकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने तयारी गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले समय दिन नसकेपछि सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई उनका प्रतिनिधिका रुपमा पठाउने तयारी भयो । आयोजकले राजदूत पुरीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने तय गर्नुअघि नै अर्को निमन्त्रणापत्र छपाएर वितरण गरिसकेको थियो । सो निमन्त्रणापत्रमा प्रमुख अतिथि सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई बनाउने उल्लेख थियो ।
तर सो निम्तोपत्रमा सभापतिको रुपमा सरदार कर्नेल सिंह चौधरी थिए । नेपालका ‘शिख भनेको प्रितम् सिंह र प्रितम सिंह भनेकै नेपालका शिख’ जस्तो अवस्था बनेको छ । यहि कारणले सभापतिमा कर्नेल सिंहभन्दा माथि प्रितम् सिंहको पनि नाम अस्वभाविक रुपमा राखियो । जबकि यो आफैंमा लाजमर्दो विषय थियो । किनभने प्रितम् सिंह कुनै पदमा छैनन् ।
धन र शक्तिको आडमा उनी नेपालका शिखहरुको एक्लो प्रतिनिधि आफैं हुँ भन्दै स्वघोषित नेता बनेका छन् । सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई प्रमुख अतिथि बनाउने योजना २५ दिन अगाडिकै सामूहिक निर्णय थियो । जसअनुसार छापिएको निम्तोको सफ्टकपी भारतीय दूतावासमा पनि पठाइएको थियो । पछि ‘बास्कोटा कार्यव्यस्तताको कारण आउन पाउँदैनन्, हजुर नै प्रमुख अतिथि हो’ भन्दै राजदूत पुरीलाई फस्ल्याङफुस्लुङ पार्ने प्रयास प्रितम सिंह समूहले गर्‍यो । कार्यक्रम बिथोल्ने नै नियतले दोस्रो निम्तो कार्ड छापेर बाँड्ने जस्तो समुदायविरोधी कर्ममा पनि प्रितम समूह सक्रिय भयो–स्रोत दावी गर्छ ।
यो प्रकरणमा पनि यहि दम्भले लाजमर्दो स्थिति सिर्जना भयो । एउटै कार्यक्रमका दुई निम्तापत्र छापिए । पहिलोमा गोकुल बास्कोटालाई प्रमुख अतिथि बनाइयो भने अर्कोमा राजदूत पुरीलाई ।
राजदूत पुरीलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको निम्तो पत्रमा वैधानिक अध्यक्ष कर्नेल सिंह चौधरीको नामसमेत राखिएको थिएन । त्यसमाथि त्यो निम्तोपत्रमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको नामोनिसान राखिएन । दुवैलाई ‘तपाईं नै हो प्रमुख अतिथि, जसरी भए पनि आउनूस् है’ भन्ने खबर पठाइयो । दुवै जना कार्यक्रम स्थलमा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित भए । तर एक म्यानमा दुई तरबार अटाउन सक्ने कुरै थिएन । पोर्टफोलियोको दृष्टिले पनि राजदूत भनेको सहसचिव सरह मानिन्छन् भने मन्त्री दुई तह माथिकै हुने भए । अन्ततः मन्त्री बास्कोटा नै प्रमुख अतिथि बने । राजदूूतलाई गेस्ट अफ अनरका रुपमा आसन ग्रहण गराईयो । कार्यक्रम औपचारिक हिसाबमै सकियो ।
राजदूूत पुरीले यो मामिलामा औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया त जनाएनन् । कुटनीतिज्ञहरुले यस्ता विषयमा बोल्दैनन् पनि । तर स्वभाविक रुपमै बुझ्नु पर्ने यो हो कि प्रमुख अतिथिका रुपमा बोलाउने तर व्यवहार फरक गरेपछि अतिथिको मनमा के पर्ला ? नेपालमा रहेका शिखहरुको विश्वसनीयतामा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
प्रितम सिंहलाई नजिकबाट चिनेका स्रोत भन्छ, ‘यो सबै हुनुमा प्रितम सिंहको फूर्ति, घमण्ठ र लठैतपन जिम्मेवार छ । जसको कुनै औपचारिक पद नै छैन, उसैलाई नेपालका सबै शिखहरुको नेता हुनु परेको छ । समस्याको मूल जड नै प्रितम सिंहको अविवेकीपन हो ।’ कार्यक्रम असफल बनाउने प्रयास प्रितम सिंह नेपालमा पहिलो पटक व्यवसायिक रुपमा ढुवानीका साधन प्रयोगमा ल्याउने शिखका रुपमा धेरैले चिन्छन्, यद्यपि त्यो सत्य भने होइन ।
यिनै प्रितमका नाति छन् अंगद सिंह, जो सात वर्षअगाडि भारतीय नागरिक थिए । तर प्रचण्ड परिवार र गगन थापासँग भएको चिनजानलाई दूरुपयोग गरेर अहिले यिनले नेपालको वंशजको नागरिकता हत्याएका छन् । झुठ र नटवरलाल प्रवृत्तिमा सबैलाई उछिन्ने अंगदको सम्बन्ध प्रचण्डपुत्र प्रकाशसँग थियो । प्रकाशको निधनपछि बिना मगर, कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाआदिसँग उनी निकट सम्बन्ध देखाएर नेपाली राज्यसंयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।
उनै अंगदले बिना मगरदेखि गगन थापासम्मलाई प्रयोग गरेर गोकुल बास्कोटासम्म एक सन्देश पठाए । त्यो सन्देश थियो, ‘तपाईंलाई शिखहरुले प्रमुख अतिथि बनाएकै छैनन् । किन जान लाग्नु भएको ? कार्यक्रममा नजानु होला ।’
अंगदको समूहले गोकुल बास्कोटालाई रोकेर राजदूत पुरीलाई मात्रै बोलाउने थियो । किनभने उनीहरु आफूहरुबाहेक अरु कुनै पनि शिखले नेपालमा केही पनि नगरुन भन्ने चाहन्छन् । उनीहरुले लाख कोसिस गरे पनि कार्यक्रम सफल नै भएर छाड्यो । प्रितम्ले भने, ‘ब्लड डोनसन नगर्नू, नगराउनू’ गुरु गोविन्द सिंहकै जन्मोत्सवका अवसरमा सोही स्थानमा कर्नेल सिंह चौधरीको मूल नेतृत्वमा शिख युवाहरुले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । रक्तदान कार्यक्रम कर्नेल सिंहको नेतृत्वमा हुन लागेको थाहा पाएपछि प्रितम् सिंहले सो कार्यक्रममा रक्तदान नगर्न आफ्ना मानिसहरुलाई निर्देशन दिए । नभन्दै गुरुको सम्मानमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा कुनै पनि शिखले रक्तदान गरेनन् । गैरशिखहरुलाई समेत रोक्ने प्रयास भयो । तर पनि गैरशिखहरुकै दानका कारण ७२ पिन्ट रगत संकलन भयो ।
अंगद सिंहले ललितपुर प्रहरी प्रयोग गरेर रक्तदान कार्यक्रम भाँड्न समेत खोजेका थिए । उनकै प्रभावमा परेर प्रहरीहरु रक्तदान स्थलमा आए । शान्तिपुर्ण रुपमा जम्मा भएका युवाहरुलाई किन ? के कारणले जम्मा भएको भन्ने केरकार पनि गरे । तर रक्तदान गर्न जम्मा भएको भन्ने जवाफ दिएपछि प्रहरी फर्किएको थियो ।